Na-aga n'ihu ndụ.
Na-akpụzi akpụzi na lightweigh.
Miri na obi ike mkpuchi.
Featherweight webbing na slimline nkechi.
Typedị ngwaahịa Okpu agha obodo ukwu
Nọmba nlereanya Urban okpu VU102
Nkà na ụzụ EPS + PC in-ebu na adụ nkuchi
Njirimara fechaa, nkasi obi isi dabara adaba, ejiji imewe
Ịgbatị nhọrọ Mbughari visor
Okpu agha nke Urban na-enye ụdị ọkaibe na teknụzụ nchedo isi dị elu, na-eme ka ọ bụrụ egwuregwu zuru oke maka ndụ gị na-aga. Ngwunye na-agbazi na-enyere aka nchebe dị mma n'okporo ámá.
Uwe eji agbapu ịnyịnya ígwè na-ewepụ ewepụ nke na-eme ka ụdị gị pụta n’emeghị ikuku ikuku. Ọ na-egosipụta atụmatụ dị ala nke ejiri ihe njiri mara iji nyere ndị na-agba ọsọ n'obodo ukwu na ndị na-eme njem aka inweta ihe ka ukwuu.
Okpu agha a jikọtara ya na EPS dị elu + nke mbụ PC shei nwere ogo teknụzụ nwere oke dị arọ. Ka ọ dị ugbu a, ọ na-enye gị ahụmịhe dị mma nke ukwuu. Okpu agha a gbaara aka na CE (EN1078) na ọkọlọtọ CPSC enwere ike ree ụwa niile na nnwale zuru oke dị ka oyi dị jụụ, hemi na-ekpo ọkụ na mmiri mgbochi mmiri. Okpu agha a haziri maka isi anyị na-etolite arụmọrụ kachasị mma maka isi onye na-agba ịnyịnya nwere akụkụ nke dabara adaba maka ndị Europe na America. Ihe mkpuchi dị elu nke dị elu na-eme ka ntutu dị nkụ ma dị jụụ n'oge ịnya, anyị mepụtara ọtụtụ pad na ihe ọhụrụ na teknụzụ maka nhọrọ ODM: Silicone padding, antibacterial / bamboo, PC / PP lamination na TPU enweghị ntụpọ.
The recycled eriri bụ mgbe niile anyị ozi maka gburugburu ebe obibi, anyị na-enye ọzọ nhọrọ na reflective gbalaga, sublimation na silicone straipu na webbing, na mgbakwunye, anyị nwere ndị ọzọ nhọrọ nke customization: multi acha ikpa, achara na mgbochi nje straps.
Akara ITW nke nwere akara Derlin POM iji jide n'aka na nchekwa nchekwa, gbaara ya na njigide yana nyocha iji gbanye okpu agha.
Na enwekwukwa airflow imewe kwesịrị ekwesị usoro nwere atọ ọnọdụ nke vetikal mgbanwe, mfe iji dozie erughị ala na otu aka na-enye ihe kasị mma nke ọma na nke ziri ezi. Eriri akwa kwesịrị ekwesị site na mgbanwe, ihe na-adịgide adịgide maka nchedo ka mma ma dịkwa ngbanwe nke ọma site na ịgbanye ọkpụkpọ rubberized. Usoro nke nwere ike iwepu ma dochie anya ya na-enye mgbanwe zuru oke maka mma.
Nke gara aga: Okpu agha Ski na umuaka V01Kid
Osote: Otutu PC Kechie chebe obodo skuuta okpu agha VU103